Tababarka Hoggaanka | Hogaanka Hogaaminta | NextMapping
Ma dareemaysaa kalsooni mustaqbalka? Ma ku faraxsan tahay fursadaha adiga iyo ganacsigaaga mustaqbalka?
Tababarkayaga hogaaminta ee NextMapping ™ wuxuu ku siin doonaa qaab dhismeedka, taageerada iyo hagida si aad u abuurto mustaqbalkaaga ugu fiican ee ugu macquulsan. Qof kasta oo guuleysta wuxuu u adeegsadaa tababare ganacsi ama tabobar hogaamineed qaab hage / tababare / hage.
Our Tababarayaasha ganacsi ee sharciyeysan ee NextMapping wuxuu kugula shaqeyn doonaa inaad dhisto istaraatiijiyad, dhiirigeliso mustaqbalkaaga fikirka shaqada wuxuuna kaa caawin doonaa inaad horumariso xirfadaha looga baahan yahay inaad ku guuleysato oo aad ku guuleysato waqtiga degdegga ah iyo isbeddelada dhakhsaha leh.
Xawaaraha socda ee carqaladayntu wuxuu sii wadi doonaa inuu si xawli ah u kordho - qofka kula tartami doona waa ganacsadaha leh maskax abuurtay Air BNB, Uber, Dropbox iyo Tesla. ”
Waxaa jira laba nooc oo maskaxeed ...
People in dadku ka yeeshaan mustaqbalka:
1. Waan ka walwalayaa markay runti aniga / meheradda aniga taabato… AMA 2. Keena! Aad ayaan ugu faraxsanahay mustaqbalka waxaanan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodo si aan diyaar ugu noqdo aniga / kooxdeyda / ganacsiga. Maskaxdii ugu horreysay waa maskax yaraanta diiradda saareysa ilaalinta xaaladda jirta iyo cabsi laga qabo isbeddel. Maskaxda labaad ayaa ah maskax faro badan oo diiradda saareysa la wareegida iyo ficil awood si loo muujiyo mustaqbalkaaga cajiibka ah. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee horjoogayaasha, kooxaha iyo ganacsatadu waxay ku sii nagaanaysaa dhiirrigelinta iyo diiradda saaridda mustaqbalka. Hogaamiyayaal badan ayaa diirada saaraya xaqiiqooyinka maalinba maalinta ka dambeysa, daminta dabka oo inta badan lumiya ujeeda aragga ama u horseedida mustaqbal dhiirigalin leh. Si loo abuuro dabeecado la cusbooneysiiyay oo soo noqnoqda oo hogaamiyayaashu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan istiraatiijiyad aasaas u ah abuurista 'waxa xiga' oo soo jiidasho leh oo ay weheliso la xisaabtan si loo sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka u ah inay mustaqbalka diyaar noqdaan Waxaa jira sayniska isbeddelka iyo saynisyahannada habdhaqanka ayaa aqoonsaday astaamaha muhiimka ah ee sameynta isbeddel waara iyadoo isha lagu hayo mustaqbalka. Waxyaabahaas muhiimka ah waxaa ka mid ah rabitaanka wax ka beddelka, dabacsanaanta maskaxda, dabeecadaha cusub iyo diiradda saarista qasab 'maxaa'.
Sidee Tababarka Hoggaamintu u shaqeeyaa:
Marka la socda 'NextMapping' waxaan leenahay hanaan macallin lahaansho kaas oo ka caawiya hoggaamiyeyaasha, xubnaha kooxda iyo ganacsatada inay guuleysigooda gaarsiiyaan heerka 'xiga'. Waxaan u adeegsanaa lixda talaabo ee NextMapping si aan u horumarino qorshe tababbarasho caadiya oo ka bilaabata meesha aad hada joogto iyo halka aad rabto inaad aado. Waxaan ku bilaabeynaa falanqeyn xaaladaada hada ah iyada oo loo marayo nidaamkayaga Discover iyo dhamaan barnaamijka tababarka tababarkaaga waxaan kaa caawineynaa sidii loo aqoonsan lahaa awoodaha iyo meelaha fursadaha kuu ah si aad u kordhiso waxtarkaaga iyo natiijooyinkaaga. Tababarayaasheena waa shahaado xirfadlayaal NextMapping ah waxayna adeegsadaan habkayaga gaarka ah ee tababaraha / la tashiga si aan kula shaqeyno. Tababbarka hogaamintu wuxuu kaaga baahan yahay hogaamiye ahaan inaad diyaar u ahaato inaad is qiimeyso, inaad laxisaabtamo inaad sameyso isbedel isla markaana aad ka go'an tahay inaad hogaamiso isbedelka kooxahaaga. Maadaama aad tahay tababarahaaga hogaamineed ee shaqsiyeed waxaan kugula xisaabtameynaa yoolalkaaga, waxaan kugula shaqeyneynaa inaad fikraddo istiraatiijiyado cusub, waxaan kaa caawineynaa inaad dejiso qorshe aad ku abuureyso mustaqbalka aad rabto. Horay ayaad u guuleysatay! Hogaamiyaasha ugu guusha badan waxay maalgashadaan inay yeeshaan aragti banaanka ah iyo taageerada tababaraha hogaaminta. Haddii aad horey u soo qaadatay tababarenimo hoggaamineed iyo haddii kaleba waxaan kaa caawin karnaa si aad u gaarto yoolalkaaga qaaliga ah.
Xeeladaha is-dhexgalka waxaa ka mid ah sayniska, xogta, xirfadaha aadanaha iyo geeddi-socodka si loo abuuro isbeddello waara oo xoog badan.
Waxaan halkaan u joognaa NextMapping ™ waxaan haynaa hanaan la hubo iyo hannaan tababarenimo hogaaminta si aan kaaga caawino:
Ku wareeji xawaaraha isbedelka dhakhsaha leh ee isbedelka iyo carqaladaynta socota si kalsooni iyo fudeyd ah
Dhiso waqtigaaga dhabta ah hal abuurka iyo xirfadaha hal abuurka
Dib ugu noqo caqabadahaaga ugu waaweyn fursadahaaga ugu waaweyn
Ku kasbato macnaha guud 'sababta' iyo waxa adiga iyo ganacsigaaga ku xiga
Dib-u-qiimeyn iyo cusbooneysiiso "OS" (maskaxda) oo diiradda saarey fara badan isla markaana siiya hoggaan isbeddel leh aragti dhiirrigelin leh oo mustaqbalka ah
Ku hogaamiso kooxahaaga iyo shirkaddaada istiraatiijiyado kordhinaya dhiirigelinta shaqaalaha, daacadnimada iyo tabarucaadda
Ku dhiiri geli bixinta adeegga macaamiisha si aad ugu abuurto taageerayaal sumcad leh shirkadaada
Istaraatiijiyadaha digitial-qaadista ah ee lagu kordhinayo waxtarka shaqsiyada iyo ganacsiga
Ugu badnaan koritaanka ganacsiga
Su’aal weyn oo aad isweydiinaysid
"Maxaan u baahanahay aniga / waa inaan badalnaa si aan si weyn ugu sii socono yoolalkayaga iyo natiijooyinkeena sanad ka dib."
Horay ayaad u guuleysatay - IYO adoo adeegsanaya NextMapping aching tababarka hogaaminta ayaa kuu balan qaadi kara inaad sameyn doonto horumarka u dhigma qorshooyinkaaga ugu fiican. Xaqiiqdu waxay tahay inaad u ordeyso sida ugu dhakhsaha badan ee aad awooddo, tamartaadu waxay ka bilaabmaysaa mid culus oo lagu dhiirrigelinayo qaab lagu celcelin karo waxaadna ogtahay inaad haysato waqtiyo badan oo dhiirrigelin ah iyo ficil diiradda lagu saarayo ayaa kuu horseedi doona himilooyinkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad balan qaadyo u sameyso naftaada iyo kooxdaada taas oo aan lagu sameynin waqti la'aan ama kala mudnaan la'aan. 'Waxa' loo baahan yahay in la beddelo ayaa ah diiradda la saarayo abuurista mustaqbalkaaga cajiibka ah iyadoo la kaashanayo la-xisaabtanka, tababare ganacsi NextMapping.. Tababbarkayaga NextMapping ™ wuxuu ka caawiyaa hogaamiyaasha sida adiga oo kale adoo adeegsanaya qaabkeena tababaraha NextMapping proven ee la xaqiijiyay si uu kaaga caawiyo inaad gaarto hadafyadaada. Email noogu soo dir michelle@NextMapping.com si aad u ballansato waajibaadkaaga waajibaadka kal-fadhiga ah.
Ka fikir Tababarkeena Hogaaminta ayaa ah xalka ugufiican adiga?